Uchwepheshe we-Semalt: Indlela Yokwakha I-Business Yakho Ye-Digital Ngokuphumelelayo
Ngokusho kocwaningo lwe-MIT Sloan Management Review kanye ne-Deloitte UniversityCindezela, amabhizinisi amaningi alungele ukuya ku-intanethi. Kulesi sifundo, cishe abantu abangu-44% abahlolisisiwe (abahlaziyi abangu-3700, abaphathi nabaphathi),kwacaca ukuthi amafemu abo ayelungele ukuphazanyiswa kokusebenza ngemuva kokwethulwa kwezindlela ezintsha zedijithali. Nokho, ama-56%abaphendulayo abazizwa bekulungele ukuguqulwa kwedijithali futhi baphikisa izindlela ezintsha - virtual private server unmetered.
Ukwamukela indawo yedijithali kungasho okuningi ebhizinisini. Ngokwesibonelo, usesho oluthileIzinqubo ze-Engine Optimization (SEO) zandisa isisekelo sakho sekhasimende. Ukubheka ibhizinisi lakho kungaba yinto enhle kuhlelo lwayo lwesikhathi eside.Kungakhathaliseki ukuthi lokhu kuguqulwa kuzokwenzeka yini noma cha, kuyadingeka ukuthi uhlelwe noma usebenzise isithombe somphumela omude. Izinkinga eziningikungenzeka ukuthi kuphakame, okuyinto evamile lapho inhlangano iguqula. Ngenxa yalokho, ukubeka amasu acacile ekusebenzelaneni nalokhuI-hitches ingaba umsebenzi owengeziwe, okuwufanelekile imizamo.
uMax Max, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende Semalt ,uchaza izici zokwakha ibhizinisi le-digital eliphumelelayo.
Ukuklama Ukucabangela Kukhuthaza Ukubambisana Nokuvuselela
Uma wenza imodeli yokuklama, inqubo ihilela ukucinga isisombululo usebenzisa isethi enikeziweof parameters iklayenti ifuna. Impendulo ayicacile, ukufeza kungenzeka kube nokusebenzisa ezinye izimiso zokwenza umqondoukusebenzisana phakathi kwamaqembu aphethwe yinguquko. Ngokwesibonelo, uma wenza ukumaketha kwe-digital, izinhlangano zingase zibekudingeka baqashe ochwepheshe be-SEO kanye nokufundisa abasebenzi babo ngamasu ambalwa wokumaketha we-digital ukulanda amaklayenti..Esikhathini samanje,amakhasimende amaningi avela ku-intanethi. Lokhu kwenzeka ukuthi amawebhusayithi ashintsha kancane kancane izitolo zomzimba.
Ukucabanga ukuklama kuhilela ukufaka zonke izici zenhlangano ukusebenza ndawonyeukwenza isixazululo sento ethile. Kuhlanganisa ukubandakanya izingqondo ezahlukene ukubuka inkinga ethize mayelana nezixazululo zesikhathi esizayo. Ngesinyeiphuzu, imibono yemibono ehlukene ihlukanisa ukunikeza ibhizinisi ukuqonda okubalulekile ekusebenzeni esikhathini esizayo. Ngokwesibonelo, iukusebenzisana kwe-MU / DAI kanye ne-SalesForce ekulweni nobugebengu bomkhumbi.
Kule ndaba, ukubiza eqenjini lezobuchwepheshe kungaba yinto ebalulekile. Izici eziningiyokwakha kanye nokuguqula isiteji sedijithali kudinga ochwepheshe abanolwazi abanolwazi abanolwazi ukubhekana nezinkinga. Ngokwesibonelo,ukusebenzisana phakathi kwama-executive executives namaqembu we-SEO kungaholela ekwakhiweni kwewebsite ephendula kahle, engagcwalisi kuphela, kephaunethuba lokufaka esikhundleni sesitolo sangokwenyama. Kulesi silungiselelo, ukucabanga ukuklama kuyadingeka ngoba ukuguqulwa kungase kuhilele ukushintshaabasebenzi, yokusungula nezinye izici eziningi.
Ukuklama Ukucabanga kuyimbono yonke, engasiza izinhlangano eziningi zihleleikusasa labo. Ukwenza abantu abahlukene bakwazi ukuletha imibono kanye nezixazululo ezahlukene. Ukucabanga ukuklama kungasebenza kakhuluamabhizinisi, futhi kungenzeka ukuthi abantu abahlukile bayithatha ngokuhlukile. Ukucabanga ukuklama kusiza ibhizinisi lakho lixazulule isikhathi esideizinkinga kanye nokuhamba kwezinye izinkinga ezikhona. Ukushintsha abantu kunzima, kepha kungaba yinto ezuzayo kwabanyeamacala. Ukucabanga ukuklama kusiza abantu ukuthi bathole uhla oluhlukahlukene lwezinto ezintsha zokudala kanye nokuthola izinga lokubambisana.Ngokusebenzisa amathiphu alesi sihloko, kungenzeka ukuba usebenzise inqubo efanele yokucabanga yokuklama. Kungaba okuvelele ekushintsheniizindlela zedijithali.